SOTO HAUS Totoralillo Land - I-Airbnb
SOTO HAUS Totoralillo Land
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarmen Luz
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uCarmen Luz iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ngaphezulu kwekhabhathi elunxwemeni, le ndawo yindawo etofotofo nepholileyo enombono ongakholelekiyo wolwandle njengabanye abambalwa kulo mmandla. Indawo yokulala inesango elibucala nelikhethekileyo lokusetyenziswa kubathengi, i-loggia eneendlela ezahlukeneyo zokuhlamba, ukuhlamba kunye nokuxhoma izinto zakho emva kolwandle kunye ne-terrace enhle enombono wolwandle. Ikhitshi lixhotyiswe 6 kunye negumbi lokulala elikhulu elinamashiti afanelekileyo. Kwigumbi lokuhlala kukho i-futon kunye nebhedi enye.
Ikhitshi lixhotyiswe ngabantu abathandathu kunye nayo yonke into oyifunayo; i-microwave, iikomityi, iipani, njl. Igumbi lokulala eliphambili elinombono wolwandle lithembisa ukuba yindawo yokuphumla oyifunayo, apho uya kufumana iidrowa eziluncedo ukushiya izinto zakho. Iloggia ekhululekile isombulula iingxaki zesanti; ngaphandle kweengxaki ungahlamba, uhlambe kwaye uxhome izinto zakho ukuze uphephe ukungcolisa indlu kakhulu. Ukuzinika incasa onayo onayo i-grill yegesi, isitulo sokuhlala kwi-terrace kunye nesithethi seBluetooth ekulula ukusisebenzisa.
Imizuzu nje eli-15 ukusuka e-Coquimbo, kwaye kufutshane nezinye iindawo zokuchithela iiholide ezoyikekayo, iTotoralillo iyaqhubeka ukuba yikona exhatshaziweyo encinci enomtsalane kubakhenkethi. Ngexesha eliphantsi, ukuzola kokusingqongileyo kwenza le spa ibe yindawo eyodwa, ilungele ukuphumla kunye nokuphumla kude nesiphithiphithi sesixeko, ngelixa ehlotyeni uyakonwabela ukusebenza kwe-spa eguqukayo enezibonelelo ezininzi ze-gastronomic.
Umbuki zindwendwe ngu- Carmen Luz
Umphathi onobuhlobo, uMacarena, uya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho. Unyamekela ukucoca kunye nokugcinwa kwendawo kunye nokuphendula imibuzo yakho. UMacarena ungumpheki, ugxile kwi-confectionery, ukuba unesicelo esikhethekileyo (umzekelo ikhekhe lokuzalwa), unganqikazi ukucela inkonzo yakhe (unokubeka ii-odolo kwangaphambili).
Umphathi onobuhlobo, uMacarena, uya kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho. Unyamekela ukucoca kunye nokugcinwa kwendawo kunye nokuphendula imibuzo yakho. UMacarena ungumpheki, ugxil…